Ghana: Lohahevitra Tao Amin’ny Tontolon’ny Twitter Ghaneana Ny Fahafatesan’ny Filoha- · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2012 12:56 GMT
Ny 24 Jolay 2012 dia niaina zavatra nampalahelo i Ghana, sambany teo amin'ny tantarany: Ny filoha amperin'asa no nodimandry. Ary dia taonan'ny fifidianana ihany koa. Raha ny rivotra niainana tao amin'ny Parlemanta, nalain'ny Ghana Television (GTV) an-tsary dia fahatairana sy alahelo satria endrika natofezaky ny alahelo lalim-paka no hita tamin'ireo Mpikambana ao amin'ny Parlemanta. Tamin'ny 8 ora alina ny Filoha Lefitra John Dramani Mahama no nanao fianianana ho Filohan'ny Repoblikan'i Ghana.
Myjoyonline.com dia nanitsy ny tatitra fohy avy aminy navoaka avy hatrany taorian'ilay fanambaram-pahafatesana narahana antsipirihany bebe kokoa ary miaraka aminà sary iray mampiseho ny fahalasanan'ny filoha ora maro taty aoriana:
Nanome rohy ihany koa izy io mankany amin'ny fanambaràna ofisialy avy amin'ny Minisitry ny Fampahalalam-baovao manamafy ilay fahafatesana.
@MsAbenaAnnan: Andro manjombona ho an'i #Ghana – Nodimandry ny filohantsika John Evans Atta Mills #johnevansattamills
@nii_ayertey: #Ghana Nodimandry ny filohantsika John Evans Atta Mills. Ilay lehilahy efa maty im-betsaka talohan'ny tena fodiamandriny. Handry am-piadanana anie ny fanahiny. #fb
@MsAbenaAnnan: Tsy manome tolotra lafatra ny tambajotram-pinday ankehitriny hatramin'ny nanambaràna ny fahafatesan'ny filoha n'i Ghana – midoboka foana ny antso. #deathofpresidentmills
@MsAbenaAnnan: vaovao VAO NILATSAKA avy amin'ny loharano anatiny: tsy nahatsiaro tena ny FilohaMills #PresidentMills ary nentina haingana any amin'ny 37 Military Hospital androany. Nodimandry talohan'ny nahatongavany tany izy. #ghana
@VickieRemoe: Nambaran'ny Radio journo fa mitangorona ao amin'ny foibe Kwame Nkrumah ireo mponina ao Accra. Ny sasany tamin'ireo tsenam-behivavy dia nampiato ny asa fivarotany #MANDRIAAMPIADANANA #RIPMills #Ghana
@feathersproject: Mazava be ankehitriny hoe maninona no i Ghana no notsidihan'i Obama fa tsy Nizeria…
@yaw_p: Afaka hahatsapa fanantenana vaovao amin'ilay filoha vaovao aho
@Africatechie: Manana fahaizana tsara ny tontolon'ny TIC ny filoha vaovaon'i Ghana http://bit.ly/NJ7QYt avy amin'ny @oafrica
@adwoagyimah: Mifohaza ho an'ny tanindrazanao ry tanoran'i Ghana. Mitaky ny fandavan-tenanao ny firenena…..
@ Africatechie: nouveau président du Ghana a une expérience approfondie des TIC http://bit.ly/NJ7QYt via @ oafrica